Indlu yelizwe eSan Miguel del Monte kwi-120km. - I-Airbnb
Indlu yelizwe eSan Miguel del Monte kwi-120km.
Ifama sinombuki zindwendwe onguMaría Constanza
UMaría Constanza yi-Superhost
Indlu yelizwe enomtsalane kubathandi bendalo nangaphandle, namhlanje uya kuyonwabela le ndlu ibukekayo idityaniswe ngokumangalisayo kumhlaba welizwe ngo-1:30 ekuseni ukusuka kwikomkhulu. Indawo egqibeleleyo yokubaleka impelaveki kwiihektare ezi-4. kwepaki! Inebala lebhola ekhatywayo yevoli, umnatha kunye nebhola, izitulo zetafile kunye neendawo zokuhlala egadini, ikhitshi elixhotyiswe ngesitovu somthi esinoqoqosho, i-grill kunye ne-oven yodongwe, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, igalari ekhangayo phantsi komthunzi wemingculuba.
Ifumaneka kwi-100 km ukusuka kwi-Federal Capital kunye ne-8 km ukusuka eSan Miguel del Monte, iLa Rinconada inika ikhefu elinokuthula kude nesixeko esikhulu kwaye ivale ngokwaneleyo ukubuya xa inkqubo ifuna.
Izibonelelo zepaki ye-4ha. i-landscaped kwaye igcinwe ngokugqibeleleyo ekusetyenzisweni yenza umntu alibale ngokupheleleyo malunga nesiqhelo.
Ukuhamba kunye nokunyuswa kwefama yonke, iihektha ezingama-70 ezifumanekayo ukuya kumahlathi eeucalyptus kunye nezilwanyana zasendle. 🦊
I-8km ukusuka eSan Miguel de Monte, idolophu yasemaphandleni ebukekayo enomda weLagoon enomhlaba kunye nezindululo ezahlukeneyo ze-gastronomic phakathi kwezindlu zeti, iigrill kunye neendawo zokutyela zeGourmet ezinombono omangalisayo weLagoon.
Umbuki zindwendwe ngu- María Constanza
Ukunokwenzeka komntu wenkonzo ngexesha lokuhlala.